Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Gbasara Akụkọ Eziokwu
SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Gladiator". Ihe omuma anyi nke umuntakiri n'akwukwo ajuju na ihe omuma banyere ihe omuma ihe site na nwata rue oge. Nchoputa ahu bu ihe ndi ozo na ndu ya, ndu ndi ozo, akuko nke ozo tutu ama aha, bilite na akuko akuko, nmekorita na ndu onwe ya.
Ee, onye ọ bụla maara na ya bụ onye nwere ike ịnakwere ma ọ bụ kwado oge igbu oge, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị na-arịa ọrịa kachasị mma. Otú ọ dị, ọ bụ nanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Salomon Rondon bụ nke na-akpali mmasị. Ugbu a n'atụbeghị ọganihu, ka anyị malite.
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
José Salomón Rondón Giménez mụrụ na 16th nke September 1989 nne ya, Maitana Giménez (onye na-elekọta ụlọ) na nna, José Rafael Rondón (onye na-ahụ maka nkà mmụta sayensị) na ìgwè ndị mmadụ dị na Catia, na Caracas, Venezuela. N'okpuru ebe a bụ foto nke nne na nna mara mma Salomon Rondon.
Ndị nne na nna Salomon Rondon - Nne nwanyị- Maitana Giménez na nna-José Rafael Rondón (Ebe E Si Nweta IG)
Emaro nna nke Salomon Rondon dika nna ya bu onye buru akuko banyere omuma nwa ya nwoke.
"Nwunye m, mgbe ọ dị ime nwere oke afọ. N'oge ahụkwa, nwanne di m bụ onye na-achọsi ike Diego Maradona n'ihi 1986 World Cup. Ọ na-apụta na oge ọ bụla anyị hụrụ egwuregwu ebe Maradona Egwú, nwa Solomon ga-agbanyekwu n'ime akpa nwa nne ya. N'ihi nke ahụ, nwanne m nwanyị kwuru na nwa m nwoke a na-amụbeghị amụ ga-abụ onye ọkpụkpọ bọl na ọ bụ onye ziri ezi. José Rafael Rondón chetara.
Rondon mechara bụrụ nwa nke abụọ nye nne na nna ya na ezinụlọ ezinụlọ ya. Ya na ụmụnne ya na-etolite, Gerardo bụ onye dị afọ atọ ọ bụ agadi na nwa nwanne ya nwoke bụ Onlymai bụ onye 3 afọ ya.
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Ọrụ mmalite
Salomon Rondon malitere ibi ndụ ya n'oge na-adịghị anya site n'ịga ije, ịgba egwu na ịra ụra na bọl kwa abalị. Ọ bụ òkè ya na football nke mere ka ọ ghara ịdaba na nhọrọ ndị ọ gaara eme dị ka nwatakịrị.
"Ebe ọ bụ na amụrụ m, m na-ejiri bọl na-agagharị mgbe niile. Mgbe m dị afọ anọ, amalitere m ịkpọ egwu n'ụlọ akwụkwọ m. "
Mgbe ọ dị afọ 4, Rondon anabatawo arụsị ya Rivaldo na Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Mkpebi ime egwuregwu football na ụlọ akwụkwọ bịara n'otu ụbọchị mgbe onye nkụzi Rondon lere nkwenye nne ya, Maitana ka nwa ya nwoke nwee ike ịgba bọl na ụlọikpe mara mma. O kwetara na Rondon malitere ịkụ bọl na ụlọ akwụkwọ n'ụbọchị. Ọganihu egwuregwu mbụ ya na-abịa n'oge egwuregwu asọmpi nke ụlọ akwụkwọ ya ebe ọ meriri ihe mbụ ya.
Rondon First Sporting Success- Ebe E Si Nweta ClubGulima
Ọbụna mgbe ị laghachiri akwụkwọ, football ka dị mkpa. Nke a mere ka o debanye aha ya n'ụlọ nzukọ ndị ntorobịa ya, San José de Calasanz nke nyere ya ohere ịkụ football n'ehihie. Rondon ji bọl dịka ihe na-arụkọ ọrụ na ọmụmụ ihe, nke na-agbada mgbe nile n'okpuru nlekọta ndị nne na nna ya bụ ndị mepụtara àgwà nke idebe foto foto nke nwa ha nwoke n'ememme nchebe nke oge mbụ.
Nna Salomon Rondon na-ekpughe ihe nwa ya nwoke na-eme n'oge ọ na-ebi ndụ na fim- Ebe E Si Nweta Cronica.
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Ụzọ Ebube
Ọ na-echekwa agụụ mmasị Salomon Rondon maka mmasị bọl, mgbe ụfọdụ ọ na-adịghị mma n'ụlọ ezinaụlọ ya. Nke a bụ oge Rondon na nwanne ya nwoke bụ Gerardo nwere obi ụtọ ịmeghe windo ụlọ ha, chandeliers na vases.
Salomon Rondon mebiri windo windo ya na bọl bọọlụ ya dị ka Kid (Ebe E Si Nweta Ego)
N'ihe na-enye ndị nne na nna ya nsogbu siri ike na-eduga na ya na-agwa Rondon na ọ ga-akwụ ụgwọ maka iko ndị ahụ mgbe ọ malitere inweta ego dịka ndị ịgba egwu ọkachamara.
Ime Mkpebi Ukwu Ahụ:
Rondon mere mkpebi kasịnụ mgbe ọ nọ n'afọ nke abụọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị Calasanz. O weere papa ya Rafael ka o nwee ihe o weere na ya na onye nkuzi onwu.
"Ọ gwara m na ọ ga-aga akwụkwọ ka ọ bụrụ bọl," nna ya chetara.
Salomon Rondon mesịrị mee mkpebi siri ike nke ịhapụ agụmakwụkwọ ya na mahadum na itinye onwe ya kpamkpam na bọl. Ọ bụ mkpebi dị otú ahụ ka ọ debanyere aha na Deportivo Gulima na-ede akwụkwọ mgbe o nwesịrị ikpe ikpe.
Salomon Rondon Deportivo Gulima ID Card (Ebe E Si Nweta ClubGulima)
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Bilie na-ewu ewu
Mgbe ọ nọ na Deportivo Gulima, Salomon Rondon lekwasịrị anya na Europe. Iji mee nke a, o kpebiri ịnọgide na-eme usoro ịgba egwú football na Aragua, ụlọ ọgbakọ Columbian nke nwere aha maka ịkwado egwuregwu na Europe. Rondon mere ozugbo ka Aragua ghọọ isi okwu nke mgbasa ozi ụlọ ọrụ.
Okporo Ụzọ Salomon Rondon (Ebe E Si Nweta na CumpleañosdeFamosos)
Ọganihu na-aga n'ihu na-eme ka ọ bụrụ onye a na-akwalite n'ime ìgwè ndị otu ụlọ ọrụ na-eto eto na-erughị otu afọ mgbe ha rụsịrị ntorobịa. Rondon mgbe ọ dị afọ 17 mere mbụ ya na Venezuelan Primera División. Ọ na-ewe oge ọ bụla tupu a kpọọ ya dị ka onye kachasị mma ná mba ya.
Akụkọ Salomon Rondon Na-aga nke Ọma Akụkọ banyere Aragua (Ebe E Si Nweta Ka AS)
N'afọ ahụ 2008, nrọ Rondon na-egwu na Europe ghọrọ eziokwu mgbe ọ nwụsịrị UD Las Palmas na Spain. N'ikwu okwu banyere oge mmetụta uche nke ịla n'ụlọ, Rondon kwuru otu oge ...
"Ịhapụ ezinụlọ m na Europe bụ ihe siri ike. Ihe ikpeazụ nne m gwara m bụ 'Gaa!' Mama m na-akwa ákwá mgbe o kwuru ya. M kwara ákwá. Adị m naanị 19 n'oge ahụ. Amaghị m ihe ọ bụla - Amaghị m esi esi nri ... Anọ m na Skype mgbe niile, sị, 'Mama, olee otu m ga esi esi esi nri?' Nne mama m yiri, 'Tinye mmiri na pan na ...!' "
Na Europe, Rondon nwere ọganihu ma hụ onwe ya na-egwu maka Malaga. Ọ naghị ewe oge ka ya na ụlọ ọrụ ahụ nwee mmetụta. Ị maara?… Mgbe na-aga na Malaga, otu nkata na-agba ọsọ na-arụ ọrụ na Rondon Ruud van Nistelrooy eme ka ọ ghara ịla ezumike nká.
Ọganihu Salomon Rondon Riri Elu (Ebe E Si Nweta Ebe E Kwuru Okwu na 20Minutos)
Salomon Rondon nọgidere na-abụ dike kemgbe ọ nwụsịrị ịka nká Ruud van Nistelrooy. N'ihi ọdịdị ya, Ọ karịrị ihe ndekọ nke LaLiga ihe mgbaru ọsọ site n'aka onye mmeri nke Venezuelan mbụ Juan Arango. "Onye nzoputa nke Malaga"A kpọrọ ya na ọ na - enyere aka na mgbasa ozi Spanish ịgba ọsọ.
Salomon Rondon si ghọọ Onye Nzọpụta nke Malaga (Ebe E Si Nweta Instagram)
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Ndụ mmekọrịta
Mmekọrịta nke Salomon Rondon bụ otu nke na-agbapụ nyocha nke anya ọha nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya enweghị ihe ọghọm. N'azụ Venezuelan na-aga nke ọma, e nwere nwunye mara mma na ụmụaka mara mma.
Salomon Rondon Nwunye na Ụmụ (Ebe E Si Nweta Salomon Rondon's Instagram)
Salomon Rondon dị ka n'oge ederede na Newcastle nke o kwenyere bụ "akwa obio"Maka ezinụlọ ya. "Nwunye m, ụmụ m abụọ, nne di m, nne nne nke nwunye m, enwere m ndị ezinụlọ m gburugburu," kwuru Rondón,
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Ndụ nke Onye
Ịmata ụdị ndụ Salomon Rondon ga-enyere gị aka ịchọta ya zuru ezu. Malite na ya, ọ bụ onye nwere ụzọ ndụ nke na-eme ka o doo anya na ọ na-etinye mkpebi iji chọọ obi ụtọ karịa ihe niile.
E wezụga ihe mgbaru ọsọ dị na pitch ahụ, Salomon Rondon na-etinye oge bara uru iji na-eme mgbatị ịgba ọsọ nke o kwenyere na-eme ka ahụ ike ya dịkwuo elu. N'okpuru ebe a bụ vidiyo nke mmemme ndị dị otú ahụ.
Rondon kwenyere n'egwuregwu dị ka egwuregwu maka ichebe onwe ya. Na vidio dị n'okpuru ebe a, ọ na-enwe ike itinye ọkpụkpọ iji mee ihe nke ọma site na ịkụziri nwa ya otú ọ ga - esi chebe onwe ya ma ghara iji egwuregwu ahụ mee ihe maka nsogbu.
Site na St James Park, na-egwu egwu na ụmụ ya na ịgba egwu, Rondon na-enweta ọṅụ na iso nkịta ya na-eje ije.
Salomon Rondon na Nkịta ya (Ebe E Si Nweta Mirror).
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Ndụ Ezinụlọ
Ịbụ onye ama ama ama ama obodo ya na onye nnọchiteanya nke otu Premier League na-eme ka ezinụlọ Salomon Rondon na mba ya niile na-anya isi na ya. Ndị nne na nna na Salomon Rondon na-anọgide na Caracas, Venezuela nke dị n'oge ederede. Nke a bụ mba nke na-adịghị eguzogide ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi ọganihu akụ na ụba na nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
Obodo Salomon Rondon na Nsogbu (Ebe E Si Nweta NBC News na Khilafah)
Na onu ogugu enweghi ike, mpụ ime ihe ike di egwu na igbu ndi mmadu gburu na Venezuela. N'ikwu banyere ihe ize ndụ nke ndị na-apụnara mmadụ ihe, Rondon kwuru ozugbo;
"Ọ bụ mmadụ ole na ole maara ndị ezinụlọ m, m na-agbalikwa ike ka ha ghara ịhụ m - ọ bụghị na Venezuela. Ọ bụrụ na m nọnyeere ha, ọ bụ mgbe niile n'ụlọ ezinụlọ. Anyị agaghị agakọ ọnụ ka anyị wee ghara ịdọrọ uche. Ana m agbalị ka m ghara ilebara onwe m anya mgbe m nọ n'ebe ahụ. "
N'agbanyeghị nchedo nchedo, Rondon adịghị eme ihere na ya na ndị nne na nna ya na-ese foto karịsịa nna ya mara mma bụ onye si na ya bụ onye nkụzi sayensị mechara ghọọ ọkachamara sayensị na otu ụlọ akwụkwọ ndị agha Venezuela.
Salomon Rondon na nna ya na-anọrọ ala (Ebe E Si Nweta Instagram)
Ụmụaka Salomon Rondon Akụkọ nke Na - Eziokwu efu
Banyere Gladiator Aha aha ya:
Dị ka mirror, Salomon Rondon na-ekpughe ozugbo na ọ na-akpọ ya aha ya ... "Anụ ọhịa ahụ. "N'oge ya na Malaga. Mgbe ọ bịarutere Newcastle, ụmụ agbọghọ malitere ịkpọ ya "Gladiator"Nke bụ aha njirimara ọ kachasị amasị ya.
"Enwere m aha aha 'Gladiator'. Nke a bụ ihe m na-agbalị ịnwe na pitch. M na-emeghe ogwe aka m, buru ibu, na-ahụ ahụ m ma na-agbalị ịchịkwa bọl maka ndị m. "
Mgbe o kwusịrị Gladiator Skills video, Rondon kpebiri ka ndị na-agbapụ ya merie maka inweta ihe nrite site na ịrịọ ka ha zipụ vidio nke flicks na aghụghọ ha kachasị mma na ihe ọ bụla nke na-adịghị eji ishtag #GladiatorSkillz #Gladiador #Gladiator. N'okpuru ebe a bụ Video Gladiator Salomon Rondon.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akwụkwọ ụmụaka anyị bụ Salomon Rondon Akụkọ nke a na-agwụghị akụkọ ndụ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Aleksandar Mitrovic Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Echiche Eziokwu
Ụmụaka Cheick Tiote Akụkọ nke Na-enweghị Ihe Ọ Bụla
Bọchị agbanweela: Septemba 17, 2020
Bọchị gbanwee: Jenụwarị 24, 2019